China Digital Automatic Refractometer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Refractometer > ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometer > ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometer
DigiPol-R series ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometers are equipped with high-performance linear CCD photosensitive components, through high-speed, high-precision signal acquisition and analysis processing technology, equipped with semiconductor Peltier super temperature control system. It can efficiently and accurately measure the refractive index (nD) of various liquids such as transparent, translucent, dark, viscous, and the mass fraction of sugar solution (Brix).
1: တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန် Built-in Peltier အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊
2: LED အအေးခံမီးရင်းမြစ်သည်ရိုးရာဆိုဒီယမ်မီးခွက်နှင့် halogen tungsten မီးခွက်တို့ကိုအစားထိုးသည်။
၃: ၇ လက်မထိတွေ့အရောင်မျက်နှာပြင်၊ လူသားဆန်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် interface
4:ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometershas passed TART and CE certification.
2. ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometer Parameter
အလင်းယိုင်သောအညွှန်း / သကြားပါဝင်မှု (သို့) စိတ်ကြိုက်
၇ လက်မ FTF အရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
220V / 50Hz ဖြစ်သည်
၃: ရိုးရာဆိုဒီယမ်မီးလုံးနှင့်ဟေလိုဂျင်အဖြိုက်မီးအိမ်အစား LED အအေးမီးအရင်းအမြစ်၊
8: ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometershas passed TART and CE certification.
ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometersis widely used in petroleum industry, oil industry, pharmaceutical industry, food industry, daily chemical industry, sugar industry, etc. It is also one of the commonly used equipment in schools and related scientific research units.
Through high-speed and high precision signal acquisition, analysis and processing technology, the Digipol-R ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometersis equipped withasemiconductor Parte super temperature control system. It can measure the refractive index (Nd) and the mass fraction of sugar solution (Brix) of transparent, translucent, dark and viscous liquid with high accuracy and efficiency.
Jiahangဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometerhas obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။How many years have your company made ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometer?
hot Tags:: ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက် Refractometer၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE